IJumbotron isebenza njani?
Umbono ngokubanzi we-jumbotrons ngokubhiyozela ngo-2012 ubusuku bokukhethwa koMongameli kwi-Times Square ngoNovemba 6, 2012 kwiSixeko saseNew York. Ifoto nguMichael Loccisano / Getty Izithombe
I-jumbotron ayinanto engaphezulu nje kombonwakude omkhulu kwaye ukuba uye wahlala kwi-Times Square okanye umcimbi omkhulu wezemidlalo, ubonile i-jumbotron.
Igama elithi Jumbotron liphawu lokuthengisa elibhalisiweyo le-Sony Corporation, abavelisi be-jumbotron yokuqala yehlabathi eqala kwi-Fair World Fair in Toyko. Nangona kunjalo, namhlanje i-jumbotron iye yaba ngumqondiso wesiganeko okanye igama eliqhelekileyo elisetyenziselwa nayiphi na ithelevishini. U-Sony waphuma kwi-jumbotron ishishini ngo-2001.
Nangona i-Sony yenze uphawu lokuthengisa kwiJumbotron, bebengabokuqala ukwenza umboniso omkhulu wevidiyo. Le ntlonipho iya kwi-Mitsubishi Electric kunye ne-Diamond Vision, i-LED enkulu ebonwakude eboniswa ngowama-1980. I-screen yokuqala ye-Diamond Vision yaqaliswa kwi-1980 Major League-All Star Game kumdlalo weDodger eLos Angeles.
Yasuo Kuroki - Sony Designer emva kweJumbotron
Umlawuli wokudala we-Sony kunye nomyili weprojekthi uJasuo Kuroki ubizwa ngokuba yi-jumbotron. Ngokwe-Sony Insider, u-Yasuo Kuroki wazalelwa eMizaki, eJapan ngo-1932. U-Kuroki wajoyina u-Sony ngo-1960. Imizamo yakhe yokwakha kunye nabanye ababini yaholela kwi-Sony logo eyaziwayo. I-Ginza iSakhiwo se-Sony kunye nezinye iindawo zokubonisa emhlabeni jikelele nazo zithwala isignesha yakhe yokudala. Emva kokubhengeza intengiso, ukucwangciswa kwemveliso, kunye neZiko lokuBumba, wamiselwa njengomlawuli ngo-1988. Iiprojekthi zokucwangcisa kunye nophuhliso kwi-credit yakhe ziquka iProfeel no- Walkman , kunye neJumbotron kwi-Exukup Expo. Wayengumqondisi weofisi yaseKuroki kunye neSakhiwo soLwakhiwo sase-Toyama, de kube sekufeni kwakhe ngoJulayi 12, 2007.
Ngokungafani ne-Toyota Diamond Vision, ii-jumbotron zaso zazingekho i-LED (i -diode-lighting-diode ). I-jumbotrons zakudala zisebenzisa i-CRT ( cathode ray tube ) iteknoloji. Imiboniso yangaphambili ye-jumbotron ngokwenene yayiqokelelwe iimodyuli ezininzi, kwaye imodyuli nganye iqulethwe ubuncinane ubuncinane kwi-CRTs yezikhukhula ezincinane ezilishumi elinesithandathu.
Ekubeni iimbonakalo ze-LED zinokuphila okungaphezulu kwama-CRT, kwakucacile ukuba i-Sony nayo yaguqula i-jumbotron iteknoloji yayo kwi-LED esekelwe.
I-jumbotrons zakudala kunye nezinye iziboniso ezinkulu zevidiyo zazibonakala zikhulu ngobukhulu, ngokumangalisa ukuba nazo zaqala ekuqaleni kwisisombululo, umzekelo; i-jumbotron engama-30 iinyawo yayiza kusisombululo se-240 nge-192 pixels. I-jumbotron ezintsha zinezigqibo ezincinane ze-HDTV kuma-pixels ka-1920 x 1080, kwaye loo nombolo iya kwanda kuphela.
Ifoto ye-Sony JumboTron TV yokuqala
I-Sony JumboTron ithelevishini kwi-Expo '85 - I-Exhibition International, iTukuba, eJapan, ngo-1985 I-JumboTron yokuqala yehlabathi. Umzekelo: JTS-1. I-Creative Commons Attribution-Yabelana ngokufanayo 2.5 Ilayisenisi yesiGrike.
Oyena wokuqala u-Sony Jumbotron waqala kwi-Fair World kwiJapan ngowama-1985. I-jumbotron yokuqala ixabisa iidola ezili-16 zeedola ukuyila kwaye yayineendali ezilishumi elinesine ubude, kunye nobukhulu bemitha engamashumi amane ububanzi ngamanitha angamashumi amabini anesibini. Igama elithi jumbotron lagqitywa ngu-Sony ngenxa yokusetyenziswa kobuchwepheshe beTron tron kwi- tron nganye ye-jumbo kunye ne- jumbo ngenxa yesayizi enkulu ye- jumbo .
Jumbotron kwiiNkundla zezemidlalo
Abafaki balinde kwizihlalo zabo njengokuba ukulibaziseka kwemoya kuboniswa kwi-jumbotron ngaphambi komdlalo phakathi kweDenver Broncos kunye neRavens Ravens kwi-Sports Authority Field eMile High ngoSeptemba 5, 2013 kwiDenver Colorado. Ifoto nguDustin Bradford / Getty Images
I-Jumbotrons (zombini i-Sony esemthethweni kunye neenguqu eziqhelekileyo) zisetyenziselwa kwimidlalo yezemidlalo ukuzonwabisa nokuzisa abaphulaphuli. Ziye zisetyenziselwa ukuzisa iinkcukacha ezondeleyo zeemeko abaphulaphuli abaphulaphuli.
Isikrini sokuqala sevidiyo esikhulu (kunye nebhodi yebhodi yevidiyo) esetyenziswe kumcimbi wezemidlalo yayimodeli yeDamond Vision eyenziwa yi-Mitsubishi Electric kwaye ayikho i-jumbotron yakwa-Sony. Umdlalo wezemidlalo wawuyi-1980 Major League Baseball- All Star Game kwiDodger Stadium eLos Angeles.
I-Jumbotron World Records
I-Jumbotrons ihlolwe kwi-MetLife Stadium phambi kwe-Super Bowl XLVIII ngoJanuwari 31, 2014 e-East Rutherford, eNew Jersey. Ifoto nguJohn Moore / Getty Izithombe
I-Sony brand enkulu uJumbotron eyenziwe yenziwe, ifakwe kwi-SkyDome, eToronto, e-Ontario, kwaye yayingama-33 ubude ubude buyikubhite ezili-110 ububanzi. I-Skydome jumbotron yabiza i-US $ 17 yezigidi zeedola. Nangona kunjalo, iindleko zithe zahlaselwa kunye kwaye namhlanje ubukhulu obufanayo buya kubiza imali engama-dollar ayi-3 yezigidi ngeekhnoloji ezithuthukisiwe.
Iziboniso zevidiyo ze-Mitsubishi Diamond Vision ziye zaqatshelwa amahlanu ngamaGuity World Records ngokuba yi-jumbotron ezinkulu kunazo zonke.
Imbali Yomnxeba weBharbed
Imbali yeSkotch Tape
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: Inviare
Ukuqonda ukuLawula ukuKhanya kwiPainting Landscape
Funda amaConfigu alula "we-Souhaiter" (ukuba ufuna)
Umzekelo kaRae Carruth
Kutheni i-Dry Ice ikwenza ibhokhwe
Ngaba iItalian iyayithanda?
Amaphulo kaPhilis Wheatley
Ingqungquthela yeBlitz ukusuka kwi-Eagle Alignment iqinisa Ukuxhasa iNkxaso
Indlela yokudibanisa i-In-Ear Monitorers
Iifom zeMculo kunye neeStyles ze-Renaissance
Phawula iizwane zakho